यी राशि भएका व्यक्ति हरेक पाइला-पाइलामा बोल्ने गर्छन् झुठ ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»यी राशि भएका व्यक्ति हरेक पाइला-पाइलामा बोल्ने गर्छन् झुठ !
यी राशि भएका व्यक्ति हरेक पाइला-पाइलामा बोल्ने गर्छन् झुठ !
By रिता घिसिंग on ७ आश्विन २०७५, आईतवार ०६:४४ धर्म/दर्शन
एजेन्सी : झूट बोल्नु भनेको खराब बानीमा गनिने गर्छ। तर पनि मानिसहरु आफ्नो फाइदाको लागि झुठ बोल्ने गर्छन्। तपाईलाई झुठ बोल्ने बानि हाम्रो राशिसँग पनि जोडिएको हुन्छ। ज्योतिषको अनुसार, हाम्रो जीवनमा राशिको चक्रको धेरै प्रभावकारी प्रभाव रहने गर्छ। राशिको संकेतको साथ, हामी व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित धेरै सानो जानकारी पनि पाउन सक्छौं। राशिका अनुसार कुन राशि धेरै झुठ बोल्ने गर्छन् भन्ने बारे आज हामी तपाईलाई जानकारी दिनेछौं।